Dzidza kuti zvii zvaungaita kuti upone pachaparadzwa nyika ino yakaipa worarama munyika itsva yava pedyo kuuya. Kumbira kudzidza Bhaibheri nemumwe weZvapupu zvaJehovha kana kuti ita zvidzidzo zveBhaibheri zviri paIndaneti pajw.org. *
^ ndima 21 Zvidzidzo izvi zviri muChirungu.
Jesu aiziva kuti Umambo hwaMwari ndihwo hwega hunokwanisa kugadzirisa zvinhu panyika. Zvii zvakatoitwa neUmambo zvinoita kuti tive nechokwadi nazvo?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Nyika Itsva Yava Pedyo!